Push Doctor 1.01 - Izicelo - Cydia [Simahla] - iPatch yee-iPhones 2G kunye ne-3G | IPhone iindaba
Push Doctor 1.01 - Izicelo - Cydia [Simahla] - iPatch yee-iPhones 2G kunye ne-3G
iberllin | | Iapps zokusebenza, Cydia
Push ugqirha Sisiqwenga sokusebenza ngokuchanekileyo kwefayile Push izaziso y YouTube kwi-iPhone 2G kunye ne-3G.
Ukuze uyifake, kuya kufuneka ukuba uyenzile Jailbreak kwisixhobo.
Ngokuqhekeka kwejele, uninzi lwezi zixhobo zombini zoTyikityo kunye neYouTube ziyeke ukusebenza.
Esi siqwenga silungisa ingxaki kwizixhobo ezininzi.
Push ugqirha, yinto eluncedo simahla enokukhutshelwa kudidi lwe "BeYoiP App" en Cydia ngokugcina YibaYakhoiPhone.
Ukuba umntu akanayo le ndawo yokugcina izinto kwaye ufuna ukuyifaka, yongeza lo mthombo eCydia:
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Jailbreak » Cydia » Push Doctor 1.01 - Izicelo - Cydia [Simahla] - iPatch yee-iPhones 2G kunye ne-3G
ye3gc akukho nto ifumanekayo okwangoku ???
Molo, eli lixesha lesibini ukuba uthumele ezi ndaba, ngaba kukho ukuphuculwa okanye ukuhlaziywa okufanelekileyo ukuba uqaphele okanye ngaba ukubambeka kuhamba kancinci?
Ekugqibeleni ndityhalele kwi-iPhone 2G !!! Isiqwenga sokuyilwa!
Isityholo sitya ibhetri entle kakhulu. Kwaye ndithetha ngomcimbi weeyure.
Molweni nonke. Ndithathe isigqibo izolo ukufaka ugqirha otyhilayo kwaye iziphumo kukuba andikwazi ukufikelela kwi-cydia. Ngexesha lofakelo iapile lavela kum kwaye lahlala livaliwe, laqalwa kwakhona kwaye i-cydia yagqitywa. Akukho ndlela yokuyiqala. Ngaba umntu unokundixelela ukuba ndenzeni. Ngaba kuya kufuneka ndiphinde ndiphinde ndivelelwe? Enkosi
Gcina iqhosha laseKhaya kunye neqhosha lamandla licinezelwe ngaxeshanye de licime ngokupheleleyo kwaye ugcine ulicofa de i-iPhone iqale kwakhona.
Ukuba ayibambi yenze amatyeli amaninzi ukuba ihlala ivula
Enkosi kakhulu i-berllin kodwa i-cydia ayinakuvulwa, iyazama kodwa ivale emva kwemizuzwana embalwa kwaye ayisebenzi
Yeyiphi iphone ne firmware onayo?
Enkosi berllin ngomdla wakho kodwa ngoMgqibelo ndenze impazamo ndafaka u-3.1.3 nge-05.12.01 kwaye, ke ngoko, ndiyanyanzeleka ukuba ndihlale ngaloo ndlela okoko kuthatha into. Ndifanele ukuba yindoda enkulu kwaye ndingabambeleli kude kube ne-jailbreak. Yintoni esinokuyenza.
Ndiyabonga ngento yonke
Musa ukuba buhlungu i-berllin, i-gaffes ihlawulwe. Ndizakuziyeka kude kuphume into. Ewe kunjalo, nceda wazise xa une-jailbreak entsha ye-3.1.3 ene-05.12.01. Ndiqinisekile ayindim ndedwa jo… Ukurhoxa kunye nomonde.
Imibuliso kubo bonke
Othandekayo ndifakele ukulungiswa kokutyhala kwaye khange kundisebenzele ...
ndiye ndenza i-jailbrake kwakhona ndicima yonke into ..
fakela ugqirha wokutyhala kwaye ayisebenzi nokuba .. = (
I-iphone yam 2g kwaye ine-firmware 3.1 eqhotyoshelwe
UNGANDINCEDA KAKHULU ENKOSI NGENXA YE-IMEYILI YAM:
Uxolo yile imeyile yam: dj_joao1@hotmail.com
NDINOKUPHATHWA KWIPODI FAKA ISITSHITSHI SEPUSH UKUBA SISEBENZA NGOKUQINISEKILEYO UKUBA NDINXIBELELANA NENKQUBO YOKUQHUBA AYIKHO NGAPHANDLE KWEENKQUBO KODWA UKUBA NDIQHAGAMSHELANA NE-MIA K YISIPHELELO AYISEBENZI KUKHO ISISOMBULULO SOKU ...
Ndifakele i-firmware4 nge-jailbreak kwaye ivuliwe i-redsnow ifuna ukufaka le nkqubo ye-fimware4 ??
Molo ndilufumene olu setyenziso ndiyathemba ukuba luyandinceda kuba ndine-2G kwaye kuyacaca ukuba usetyenziso luvaliwe kukho amaxesha apho ikhamera ingavuli kwaye andazi ukuba ndiyathemba ukuba iyandinceda kwaye ukuba omnye umntu anganakho Ndincede ndingayixabisa i-imeyile yam ichzans@gmail.com
iDaze 9000, isilumko kwi-iPhone yakho
I-RedEye Mini: Eyona iadaptha ye-infrared ye-iPhone